Coronavirus: Sophie Raworth oo ka warramaysa waddooyinkii saxmadda badnaa ee London oo haatan haawanaya |
Coronavirus: Sophie Raworth oo ka warramaysa waddooyinkii saxmadda badnaa ee London oo haatan haawanaya
Labadii todobaad ee ugu dambeeyay, tan iyo markii ay bilowdeen xayiraadaha, ayaa daadihiyaha barnaamijta BBCda Sophie Raworth ayaa xilliga qadada waxa ay xafiiska ku imanaysay orod si ay u soo jeediso barnaamijka BBC News ee Six iyo Ten, waxa ay qaadaysay sawirro markasta oo ay soo marto meel caan ah. Waxa ay halkan uga sheekaynaysaa sida uu qofka ugu dhex mushaaxi karo waddooyinka haatan la cidleeyay ee caasimadda.
Waa wax lalayaabo aamusnaanta ka jirta bartamaha magaalada London. Waxaan caasimaddan ku noolaa inta badan noloshayd waxaanan ka weecan jiray dadka faraha badan ee tuban waddooyinka, iyo kuwa isku garbinaya tareenka ee garabka garabka isugu haya.
Waxaan marwalba jeclaa mashquulka badan ee London, cododka kala duwan ee dadka ka kala yimid daafaha dunida, balse haatan si layaab leh loo waayay.
Lahaanshaha sawirkaSOPHIE RAWORTH
Xafiiskeenna waxa uu ku yaal bartamaha magaalada London, aagga Oxford Circus, oo ah wadada ugu mashquulka badan Yurub ee ay dadku u dukaamaysi tagaan halkaas oo maalintii ay yimaadaan ku dhawaad nus malyuun qof. Haatan dadka maraya iyo qoylayada waxaa badan qoylayada, iyaguna malahayga waxa ay la yaaban yihiin halka ay dadkii aadeen.
Gurigayga waxa uu lix mayl u jiraa xafiiska BBCda. Labadii todobaad ee la soo dhaafayna waxaan haddba dhinac u soo jarayay waddooyinka kala duwan ee caasimadda, oo haatan haawanaya. Waana wax aad loola yaabo, sida aanay cidina u joogin oo marwalba oo aan istaago oo aan geesahayga eego oo aan is iraahdo bal wax dhageyso.
Waa cidlo ciirsila ah oo ku cabsi galinaysa. Waa cidlo aanan hadda ka hor weligey ku dareemin gudaha London. Maalin dhaweyd waxaan istaagay fagaaraha Leicester, waxaan layaabay sida ay meeshu cidlo u tahay oo ma jiri cid meesha maraysay.
Bartamaha London waxa kaliya ee aan ku maqli karayay ayaa aheyd calamada ka dul babanaya mid ka mid ah shaneemooyinka albaabada la isugu dhuftay.
Isla aaggaas meesha lagu magacaabo China Town waxaa lagu xardhay buufinno casaan ah, hasayeeshee dhammaan makhaayadihii halkaas ku yaallay waa ay xiran yihiin, dadkii safafka ku jiri jirayna cidna halkan kama muuqato.
Xitaa isgoyska iyo fagaaraha Piccadilly Circus, ee ay dadku buuxi jireen, meeshii layaqaannay ma ahan. Nalalku weli waa ay daaran yihiin laakiin yaa fiirinaya ileen cidiba ma joogtee? Xayeysiin wayn oo meesha ku dheganaan jirtay ayaa waxaa lagu badelay tacsi loo diro howlwadeennada caafimaadka ee NHS iyo kuwa adeegyada degdega ah.
Goobaha tareennada laga raaco ee aadka u mashquulka badnaa ee London ee Waterloo, Paddington, St Pancras ee ay maalintiiba ku qulquli jireen malaayiinta qof, ayaa haatan waxaa ku sugan dhowr qof oo rakaab ah oo aad moodid inay jihadii ka luntay, waxaan halkaas ku arkay mid ka mid ah howlwadeennada tareenka oo xiran dareeskii lagu yaqaanay oo ii eegaya si ay calaamad su’aal ku jirto, kaddibna waa uu dhoolla caddeeyay oo gacantuu ii haatiyay mar aan orod ku agmarayay.
Waddada Regent, iyo goobta loo dukaamaysi tago ee Covent Garden, midda Knightsbridge, goobahaas oo ah meelaha dadka London ay u dukaamaysi tagaan, ayaa haatan waxaa lagu iibiyaa oo kaliya alaabaha asaasiga ah, albaabadooduna waa ay xiran yihiin.
Waxaa markii ugu horraysay 170 sanadood muddo aanan la cayimin la xiray bakhaarada Harrods, waxaa meesha laga saaray aaladihii quruxda badnaa ee ku xirnaa dariishada oo waxaa lagu badelay teendho wayn oo qaansa roobaadka oo kale u sameysan oo ay leedahay waaxda caafimaadka ee NHS.
Aagga loo dukaamaysi tago ee Covert Garden, waxa aalaaba buux dhaafin jiray dalxiisayaasha iyo u dukaamaysi tegi jiray oo ma aanay uu suuroobi lahayn inaan halkaas orod ku maro. Balse haatan markaan hormarayo dukaamada xiran ee aan ordayo waxaan maqlayaa codka kabahayga. Suuqii oo dhan anigaaba la wareegay.
Goobtaas ayaan kaligey ku dhex ordayaa, hasayeeshee saddex todobaad kaddib muddo ku began waxaan halkaas ku wada ordi lahayn tobannaan kun oo qof oo ay ka go’an tahay iyagoo daalan inay gaaraan xariiqa lagu dhammeeyo maradoonka 40-aad ee London.
Xarunta shirarka ee ExCel ee bariga London oo ay aheyd in dadka tartamaya inay nambarradooda ka qaataan ayaa haatan waxaa ka buuxo sariiro caafimaad oo loo dhigay kummaan bukaannada cudurka coronaviruska ah.
Waxaan kaligey waddooyinka London ku maraa orod anigoo shaqotagaya, sababtoo ah la iima ogola inaan qof kale wada orodno.
Waa magaalo xirxiran iyadoo dhan oo aan kaligay dhexmaraayo. Waxaan maqli karaa codka shimbiraha iyo dad sheekaysanaya oo wax badan iga fog. Inaan maqli codka diyaarad waa wax aan aad ula yaabayo. London wax ay u eg tahay goob filim lagu daawaday oo laga dareeray.
Markaan ku dhex ordaya waddooyinka waxaa maskaxdayda ku soo dhacaysa xusuustii aan magaaladan kula qaatay qoyskayga, saaxiibaday, meelihii aan tagay, xafladihii aan ka qeybqaatay, kuwaas oo dhammaantood haatana ah xusuus hore iyo waqti tegay.
Carruurteyda ayaa carruurtooda waxa ay uga sheekayn doonaan todobaadyadan aannu ku jirno, malaha xitaa bilaha, markaas oo ay magaaladeenna ay haawatay. Nolosha London waa ay soo laaban doontaa, buuqii iyo dadkii badnaana caadi ayey ku soo laaban doonaan.
Ilaa iyo xilligaasna, waxaan shaqada ku iman doonaa lug xilligan magaaladaydu ay faaruqa tahay.